News Collection: "कपडा खोलेकै भरमा फिल्म खेलेकी हैन"
"कपडा खोलेकै भरमा फिल्म खेलेकी हैन"
नायिका बन्ने चाहना बोकी चितवनबाट काठमाडौं आएकी विनीता बरालले 'चपली हाइट' बाट एकाएक चर्चा कामइन् । त्यो चर्चा कतिले अश्लीलतामा अग्लिएको माने त कतिले चुनौतीपूर्ण भूमिकामा । प्रस्तुत छ उनै बिनीतासँगको गफगाफ ।
'फुलस्टप’ मा भूमिका के छ ?
एकदम फरक । जहिल्यै कुर्ता सलवार लगाएर हिँड्ने केटी । तर फिल्मको क्यारेक्टरबारे अहिले नै खुस्काउन नमिल्ने छ । नौ जनाको फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ, कलेजको । हाम्रै सर्कलका दुई जोडीको घरबाट बिहे गरिदिन मान्दैनन् । अनि हामीले नै उनीहरूको विवाह गरिदिने क्रममा मनकामना पुग्छौं । परिवारको चाहना विपरीत गएर अभि (सविन) र मैले (प्राशु) त्यसको नेतृत्व लिन्छौं । 'चपली हाइट' मा दोस्रो भागपछि कन्फलक्ट आउँथ्यो भने यसमा सुरुमै ।
चपलीकी बिनीभन्दा पूरै फरक ?
यसमा बिनी कतै पनि नदेखियोस्, प्राशु नै देखियोस् भन्ने प्रयास गरेकी छु । बोल्डनेस भने यसमा पनि छोडेकी छैन । मलाई कुर्ता र सारी दुवैमा सेक्सी देखिन्छ । सेक्सी देखिनैका लागि वा कसैलाई आकर्षित गर्न सर्ट, स्कर्ट वा बिकिनी नै लगाउनुपर्छ वा टपलेस हुनैपर्छ भन्ने लाग्दैन । बरु अघिल्लो फिल्ममा जे-जति कमजोरी थिए, यसमा सुधार्ने प्रयास गरेकी छु ।
कस्ता कमजोरी ?
९७ प्रतिशतले 'चपली हाइट' मा मेरो अभिनयकै प्रशंसा गरे । आफैंलाई चाहिँ फिल्म हेर्दा डायलग डेलिभरीदेखि लाइट म्यानेजिङ, को-स्टारलाई सँगै लिएर जाने वा केमेस्ट्री मिलाउने जस्ता प्राविधिक पक्षमा कमजोर रहेछु भन्ने लाग्यो ।
दर्शकलाई प्राशुले के कुराले तान्छे ?
उसको एक्टिङले । पहिले बिनीको ग्ल्यामर इमेजले तानेको थियो, हुन त एक्टिङको पनि तारिफ नै भयो ।
त्यसो भए बिनीको छवि सुधार्न खोज्नुभएको हो ?
त्यही नै बलियो कारण हो । एक्टिङभन्दा पनि शरीर देखाएर हिट भएकी हो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । ती सबै चीजलाई ब्रेक गर्न पनि चाहन्थें । कपडा खोलेकै भरमा फिल्म पाएकी त होइन मैले । परर्फमेन्स नै राम्रो नगरेको भए त 'फुलस्टप' पनि पाउँदिनथें होला वा त्यस्तै सेक्सुअल कन्टेन्टकै मात्र फिल्म खेलिरहेकी हुन्थें होला । खासमा विनीता बराल भनेकी सेक्सी मात्रै होइन, भर्सर्टाइल व्यक्ति हो भन्ने प्रमाणित गर्नु छ । त्यसैले पनि कतिवटा स्क्रिप्टपछि 'फुलस्टप' छानेको हुँ ।
कतिवटा स्क्रिप्ट लत्याउनुभयो ?
१५/२० वटा नै होला । सबै उस्तै, सेक्स रिलेटेड मात्रै । 'चपली हाइट' सेक्सुअल कन्टेन्टमा बने पनि त्यसमा कन्टेन्ट थियो । यौन शोषणमा परेकी एक युवतीबारे थियो जुन समाजमा विद्यमान पछिल्लो विकृति हो । त्यसपछिका स्क्रिप्टमा चाहिँ सेक्सुअल भ्वायोलेन्स बाहेक केही पाइनँ ।
अहिले त चपली गर्ल बन्ने लहर नै आएको छ त ?
उहाँहरूलाई प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि विनीताले किस सिन दिएर मात्र चर्चा कमाएकी होइन । 'चपली हाइट' मा जोखिम लिएर काम गरेको पक्कै हो । ज्वालामुखीतर्फ सिधा गइरहेको म अहिले त्यहाँ पुग्नुअघि नै यू-टर्न मारेर फर्किएकी छु । तर उहाँहरू त सिधै ज्वालामुखीमा जानु भएको छ । आवश्यकतामा हो भने अहिले पनि मलाई कुनै पनि दृश्य दिन आपत्ति छैन । तर जबरजस्ती राखिएको हो भने त्यसमा समस्या हुन्छ । त्यस्तोमा काम गर्दा पर्सनल लाइफ र प्रोफेसन दुवैलाई बिगार्छ । त्यसमा मैले पढेर बुझेर काम गरेकी थिएँ । डिफेन्स गर्न सक्ने आँट पनि थियो ।
अनि दोस्रोमै फुलस्टप त ?
फुलस्टप मेरो करिअरमा भयंकर लाग्नेवाला छ । 'फुलस्टप' पछि त न्यु बिगिनिङ हुन्छ नि । जहाँ फुलस्टप लाग्छ त्यहाँबाट अर्को नयाँ सुरुवातको सफलता हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । यसपछि पनि 'म्यारी मी' र नाम राख्न बाँकी अर्को फिल्म गर्दै छु ।
तपाईं पनि परालको आगो जस्तो बलेर झ्याप्पै निभ्ने त होइन ?
म जमिनबाट उम्रेकी हुँ, टुप्पाबाट पलाएको होइन । यो स्थान पाउन ठूलै स्ट्रगल गरेकी छु । सेक्सुअल र फिजिकल ह्यारासमेन्ट सहनु त परेन । तर एभरेज लुकिङ गर्ल भएकीले प्रायःले 'हिरोइन जस्तो देखिनुहुन्न' भनेर फर्काइदिन्थे । राख्छु भनेर कतिबाट निकालियो । सानो जिउडाल, हाइट थोरै भएर पनि होला । हिरोइन भनेको अप्सरा जस्तो रातो वर्णकी, जीउडाल ठूलो भएकी र मिलेकी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मैले तोडिदिएँ । हिरोइन भनेको देख्नमा राम्रो मात्रै होइन, अभिनय कौशल पनि हुनुपर्छ ।